Buug lagu soo bandhigey Garowe
29 Dec 29, 2012 - 6:21:19 AM
Hoolka Shirarka PDRC Garowe ayaa maanta 29 December,2012 lagu soo bandhigey Buug loogu talo galay in ay ka faaideystaan ardeydu oo iska kaashadeen Hayada Inter Peace iyo PDRC,waxana ka soo qaybgala xaflada masuuliyiinta waxbarashada,maamulayaal ,macalimiin,aqoonyahano iyo marti lagu casumey.
Buugan ayaa ka soo qaybgalyaashu ka yeelan doonaan dood iyo falanqeyn qaybaha uu ka koobanyahay ,waxana lagu wadaa in maalmaha soo socda dhameeyaan.
Agaasimaha guud ee Waxbarashada Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed ayaa furey kulankan ,waxana uu u mahadceliyey hayada PDRC oo sameysey ,halka uu ka qaybgalayashana u ku booriyey inay isla eegaan buugan cusub.
Agaasinka PDRC Dr,Cabdiraxman Cabdule Shuuke ayaa dhankiisa sheegey in buugani ku jiraan qaybo faa’ido u leh barnaamijka waxbarashada Puntland halka uu soo qaybgalka mahad ka celiyey.
Waa markii ugu horaysay oo waxbarashada Puntland lagu soo kordhiyay buug ay ku yaalaan casharo ka hadlaya Amniga ,Dimuqaadiyada Maamul wanaaga iyo xukun baahinta taa soo looga faa’iidayn doono ardayda reer Puntland.
Halkan ka dhageyso Warbixin Siciid Axmed ka diyariyey badhigan cusub